Kusvika kwemwedzi pamwedzi kwevanopfuura mabhizinesi zviuru makumi mashanu, vanoita zvisarudzo, vezvekutengesa, uye vezvekutengesa.
77.3% yevashanyi vedu vanosvika kubva kunjini dzekutsvaga.
Yakadudzirwa (muchina) mumitauro inodarika zana iine 100% Chirungu
Mazuva ese uye vhiki nevhiki 30,000 vanobhadharira email.
Iyo yakasanganiswa yemagariro enhau inotevera ine vanopfuura zviuru makumi mashanu vateveri.
Vashanyi vedu vari kutsvaga, kutsvaga, uye kudzidza kwavo kunotevera kutengesa uye kushambadzira tekinoroji uye nzira dzakabatana. Ongororo dzinoisa izvi seizvo zvinonyanya kufarira:
Kushambadzira & Kushambadzira Services
Bhizinesi & Kugadzira Software
Dhizaini Webhu & Kuvandudza
SEO & SEM Mabasa
Martech Zone ndeye uye inoshandiswa ne DK New Media, LLC, iyo agency ye Douglas Karr. Kana iwe uchida yakadzama analytics mishumo, ndokumbira undibate.
Isu tinogona zvakare kugadzira zvirongwa zvetsika iwe zvichienderana nemudziyo, nyika, chikamu, uye zuva renji. Tapota tipei mamwe mashoko kuti tigozokurukura newe izvi. Ndokumbira usashandise iyi fomu kuti uwane ruzivo pane zvakabhadharwa mapositi kana backlink zvikumbiro. Chikumbiro chako chichadzimwa. Isu hatipe chero yakabhadharwa backlinking.